Hanti dhowrka qaranka: “Nafteyda halis ayay ku jirtaa” - iftineducation.com
Hanti dhowrka qaranka: “Nafteyda halis ayay ku jirtaa”
iftineducation.com – Hanti Dhowraha Guud Qaranka Dr Nuur Jimcaale Faarax, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in naftiisa ay halis ku jirto, isagoona dhaliil kulul u jeediyay Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia.
Hanti Dhowraha iyo Shaqaalaha kale ee hay’addaasi oo ka hawlgeli jiray Madaxtooyada Somaliya, ayaa waxaa maanta xoog kaga celiyay Ciidamada Ilaalada Madaxtooyada Somaliya.
“Nafteyda ayaa halis ku jirta, xafiiska waxaa uu ilaa 1975-kii ka shaqeynayay Madaxtooyada Soomaaliya, ma aqaan maanta waxa lagu haysto,waxaa la diidan yahay shaqada aan u hayno Ummadda Somaliyed.” Ayuu yiri Dr. Nuur Jimcaale Faarax.
Wuxuu kaloo sheegay in Maamulka Madaxtooyada ay weydiiyeen waxa lagu heysto, loona sheegay in la xanibay, shaqadii ay u hayeen Qaranka.
“Maamulka ayaan weydiinay arrinta xanibaada waxaa noogula Jawaabay waa xanibaad, marka waxaan cadeeyneynaa in shaqadii aan Shacabka u haynay Madaxtooyada Soomaaliya laga Joojiyay.” Ayuu yiri Hanti Dhowraha.
Dr Nuur Jimcaale oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa si kulul Madaxtooyada Somaliya ugu eedeeyay in ay ka masuul tahay, falkii maanta dhacay.
Ninkaan, ayaa shalay Maxkamadda Gobolka Banaadir ku eedeeyay inay sii deysay markab shisheeye, oo dhawaan ay gacanta ku dhigeen, markii si sharci daro ah uu kaga kalluumeysatay xeebaha Somaliya.
Madaxweynaha oo amray joojinta isticmaalka afafka qalaad: SAWIRRO